सकारात्मक सोचले लगानी गरेको छु – निकेश लिम्बु
पछिल्लो समयमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा निर्माताहरुको आगमन बढ्दो रहेको छ । उता एक दुई ओटा सिनेमा निर्माण गरेर चलचित्रको ब्यापारमा सुन्य भएपछि यस क्षेत्रबाट सन्यास लिनेहरुको क्रमपनि बढिरहेको छ । यस्तै क्रममा नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई योगदान गर्नका लागी चलचित्र निर्माणमा आएका छन्, निकेश लिम्बु । सफल चलचित्र ‘हसिया’ मा सह निर्माता मार्फत नेपाली चलचित्रमा आगमन भएका निकेश अहिले सुरज सुब्बा नाल्बो निर्देशित ‘रातो घर’ का निर्माता हुन् । निकेश संग गरिएको छोटो कुराकानी
कसरी चलचित्र निर्माणमा हात हल्नु भयो ?
सानै देखी फोटोग्राफी प्रतिको मोह र नेपाली चलचित्र क्षेत्र को लागि केहि गरौ भन्ने सोचले गर्दा चलचित्र निर्माणमा हात हाल्छु भन्ने थियो । यसै सिलसिलामा चलचित्र हसियामा सह नीर्माता को रुपमा आए । हसियाको सफलताले अब नेपाली चलचित्रमा निरन्तरता र्दिनु पर्छ भन्ने भएर चलचित्र रातो घर निर्माणमा लागे ।
चलचित्र ‘रातो घर’ कस्तो चलचित्र हो ?
चलचित्र भनेको मनोरन्जन मात्र होईन बिचार पनि हुनु पर्छ । रातो घर्, समाजमा भएको घटना, हत्या, हिंसा कालो बजार यस्तै नराम्रा कार्य या गतिबिधीहरुलाई सही बाटो मा मार्ग दर्शन दिने, जनचेतनामुलक चलचित्र हो ।
‘रातो घर’ बाट के अपेक्षा राख्नु भएको छ ?
यस चलचित्रले मनोरन्जन मात्र होईन समाजिक म्यासेज दिने भएकाले रातो घर बाट चलचित्र क्षेत्रमा एक सफल भन्दापनि असल निर्माताको रुपमा स्थापित हुने अपेक्षा छ ।
चलचित्रको लगानी उठायन मुस्किल परि रहेको अवस्थामा लगानी उठ्नेमा कत्तिको को बिश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म ढुक्क छु । किनकी चलचित्रमा मैले सकारात्मक सोचले लगानी गरेको छु । कुनै फाइदाको लागी होइन । तर पनि म लगानी उठाएरै छोड्छु । , मेरो ओभरसिज रिलेसन राम्रो छ , चलचित्र चलाउने फर्मुला जानियो भने लगानी उठ्ने निश्चित छ । चलचित्र क्षेत्रमा यस्तो धेरै उदाहरण छन जस्तै मेरै साथि राजकुमार राई ,छविराज ओझा, हाम्रै चलचित्र हसिया भनु हसियाको लगानी धरै भए ओभरसिज बाटै सत्तरी प्रतिशत लगानी उठाउन सफल भयौ । प्रडक्ट राम्रो मात्र भएर हुदैन त्यसलाई विकाउन पनि जान्नु पर्दछ ।
‘कहीँ कतै’मा ‘इनोसेन्ट’ छु: सिवानी
प्रतिष्ठान अध्यक्ष बद्री पंगेनीलाई प्रकाश कटुवालले लगाए यस्तो गम्भिर आरोप